Soosaarayaasha & Alaab-qeybiyeyaasha Polycrystalline | Shiinaha Polycrystalline Factory
MUUQAALADA MUHIIMKA AH 5/6/9 Busbar Solar Cell 5/6/9 busbar cell solar wuxuu qaataa tiknoolajiyad cusub si loo hagaajiyo waxtarka qaybaha, wuxuu bixiyaa muuqaal qurxoon oo qurxoon, kana dhigaya mid ku habboon rakibida saqafka. Waxtarka sare ee beddelka moduleka sare (illaa 18%) wuxuu ka faa'iideystaa teknolojiyadda Passivated Emmiter Rear Contact (PERC). Waxqabadka PID Resistance Wanaagsan Anti-PID wuxuu damaanad qaadayaa hoos u dhigida awoodda xaddidan ee wax soo saarka ballaaran. Waxqabadka hooseeya ee muraayadda horumarsan iyo unugyada dusha sare ee dusha sare ...
MUUQAALADA MUHIIMKA AH 5/6/9 Busbar Solar Cell 5/6/9 busbar cell solar wuxuu qaataa tiknoolajiyad cusub si loo hagaajiyo waxtarka qaybaha, wuxuu bixiyaa muuqaal qurxoon oo qurxoon, kana dhigaya mid ku habboon rakibida saqafka. Waxtarka sare ee beddelka moduleka sare (illaa 18.01%) wuxuu ka faa'iideystaa teknolojiyadda Passivated Emmiter Rear Contact (PERC). Waxqabadka PID Resistance Wanaagsan Anti-PID wuxuu damaanad qaadayaa hoos u dhigida awoodda xaddidan ee wax soo saarka ballaaran. Waxqabadka hooseeya ee muraayadda horumarsan iyo qoraalka dusha sare ee unugga ...
MUUQAALADA MUHIIMKA AH 5/6/9 Busbar Solar Cell 5/6/9 busbar cell solar wuxuu qaataa tiknoolajiyad cusub si loo hagaajiyo waxtarka qaybaha, wuxuu bixiyaa muuqaal qurxoon oo qurxoon, kana dhigaya mid ku habboon rakibida saqafka. Waxtarka sare ee beddelka moduleka sare (illaa 17.93%) wuxuu ka faa'iideystaa farsamada Passivated Emmiter Rear Contact (PERC). Waxqabadka PID Resistance Wanaagsan Anti-PID wuxuu damaanad qaadayaa hoos u dhigida awoodda xaddidan ee wax soo saarka ballaaran. Waxqabadka iftiinka hooseeya ee muraayadda sare iyo muuqaalka dusha sare ...